Shiinaha warshad sharaabaadyada dharka lagu daweeyo | Huanyi
sharaabaadyada daaweynta qabow
Kuwa sharaabaadyada dejinaya ee qabow, warshadeenu waxay leeyihiin cabirro iyo ikhtiyaarro kala duwan, tusaale ahaan buluugga barafka, buluugga tiffany, guduudka, casaanka, cagaarka, madow. Waxaan caado u nahay suunka cad ama madow ee leh velcro, talooyin badan oo xirmo ah oo aad adigu dooran karto.
Nagala soo xiriir liisaska qiimaha ugu dambeeyay!
Fudud Si Loogu Isticmaalo sharaabaadyada Daaweynta Cudurka Qabow Fudud oo wax ku ool ah, sharaabaadkeena qaboojinta leh xirmooyinka barafka jel waa xalka weyn ee daaweynta daaweynta qabow ee guriga si loo gaaro gargaar daqiiqado. Waxaad ku dari kartaa xirmooyin jel ah oo qaabab kala duwan leh ama aan lahayn khadadka cadaadiska, dhammaantood ka hooseeya baaritaanka cadaadiska 150kgs oo hubi la'aan daadasho kasta.
Wax soo saarkaagu ma yihiin kuwo kufilan badbaadinta cuntada ama jirka aadanaha?
Dhammaan waxyaabahayaga PVC, PE, Nylon, Lycra, Gel waa kuwa aan sun lahayn oo leh FDA, MSDS, CE warbixinnada.
2. Waa maxay MOQ-daadu?
Guud ahaan MOQ badanaa waa 1000 ama 2000 lammaane. Haddii loo baahdo waxaan haysannaa dhar kayd ah iyo suun, waan la xaajoon karnaa iyadoo ku xiran xaaladda si aan u siino taageerada ugu fiican ee macaamiisha si ay u tijaabiyaan suuqa
3. Waa maxay daabacaaddaadu?
Waxaan sameyn karnaa daabacaadda shaashadda xariirta, daabacaadda dejinta, daabacaadda UV ama istiikarka ayaan dhignaa Waxay kuu dooran doonaan dariiqooyin daabacaad oo kugu habboon adiga oo raacaya qaabkaaga.
bixi 30% qaddarka kadib amarada ay xaqiijiyeen T / T. Waxaan u aqbali karnaa L / C iyadoo loo eegayo tirada amarka.
5. Ma bixin kartaa shaybaarro bilaash ah?
haa 1-3 shaybaar bilaash ah oo lacag la'aan ah adiga inta xamuulka la qaadayo. Haddii aad u baahato inaad caado ka dhigato astaantaada ama qaabkaaga, waxaan u baahanahay inaan ka wada hadalno khidmadaha shaybaarka iyadoo ku xiran daabacaadda ama qiimaha qaabka.
Hore: Xirmooyinka barafka carruurta
Xiga: mitten baraf
Kabaha Barafka Cagta
Xidhmooyinka Daaweynta Cagta ee Barafka
Sharooyinka Jel dejinta
Baakadaha Barafka ee Cagaha